पूर्वमाओवादीहरुलाई एमालेमा छानी-छानी ठेगान लगाउने ओलीको षड्यन्त्र ! | Dainik News Nepal
पूर्वमाओवादीहरुलाई एमालेमा छानी-छानी ठेगान लगाउने ओलीको षड्यन्त्र !
काठमाडौँ । सर्वसम्मत गर्ने प्रयास विफल भएपछि नेकपा एमालेको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने नै भएको छ । केहीबेरमा मतदान हुँदै छ ।